Isamsung inokunikezela ngezikrini zayo ezisongelayo kwiApple | IPhone iindaba
Isamsung inokubonelela ngezikrini zayo ezisongelayo kwiApple
Inkcazo ye- Galaxy Fold Kubangele ukuhla kweentshukumo kuzo zonke iinkampani zetekhnoloji. Amalungelo awodwa omenzi wechiza kunye neeprojekthi zokuloba ziqala ukuza phambili kwaye zizame izicwangciso zoyilo evumela ukugcina ukhuphiswano lokwenyani ngeSamsung okanye iHuawei. I-Apple inokusebenza kwiscreen se-hybrid prototype esingasokuze siyibone kude kube ngu-2020.
Impumelelo yetekhnoloji ye-Samsung ibinokuseta iintsimbi ze-alamu eziofisini kwaye ibinokuba njalo wanikezela izikrini ezisongelayo kwiApple nakwezinye iinkampani, oko kungathetha ukulawulwa kweepaneli zolu hlobo kweyona nkampani zinkulu zetekhnoloji emhlabeni.
Ngaba iApple iya kuthenga izikrini ezisongelayo kwi-Samsung?
Imithombo yeendaba yaseAsia ETNews uxele ukuba abaphathi beSamsung Ngebabenike iApple ukusongelwa kwesikrini. Oku kuyakuvumela, kwelinye icala, ukubonelelwa okwenyani kwezikrini ezisongelayo kwi-Big Apple, esele isebenza kule teknoloji, enkosi kumalungelo awodwa omenzi wechiza achaziweyo. Kwelinye icala, i-Samsung iya kuvelisa ingeniso enkulu njengoko inokwandisa imveliso yabo iye kwiiphaneli ezizizigidi ezili-10 ngonyaka, endaweni yezigidi ezi-2.5 eziveliswayo ngoku.
Le ntshukumo ihlakaniphile kwicala le-Samsung, ejolise ekukhokeleni icandelo lendaleko kunye nezinto ezintsha ezijolise ekubeni zingaguquguquki kule minyaka izayo. Kuyingozi yeapile fumana lo mthamo weepaneli ukuba awukenzi iprototype yokwenyani ehlangabezana nokuzibophelela kumgangatho ebesinikezela ngawo iminyaka emininzi. Ke ngoko, sinokulinda kuphela kwaye sizame fumana ulwazi olongezelelweyo kolu qikelelo ukusukela kwelaseCupertino Akukho ntelekelelo malunga ne-hybrid ye-iPhone enokusongeleka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Isamsung inokubonelela ngezikrini zayo ezisongelayo kwiApple
Uyisebenzisa kanjani i-AirPods kunye nezinye iiseti zentloko zeBluetooth ngeApple TV